I-Semalt Expert: I-Surefire Ways Ukukhusela I-Site esuka kwi-Hackers
Uninzi lwabantu bacinga ukuba i-website yabo ayinanto ebalulekileyo yokuhlaselwa. Iwebsite ingabaukutshatyalaliswa ngumnxeba ukusebenzisa iseva ukudlulisa ugaxekile okanye ukuyisebenzisa njengesixhasi sexeshana ukufumana iifayile ezingekho mthethweni. Hackers ihlose iwebhusayithiamaseva kumabhaknini am, asebenze njengeebhodnetshi okanye umfuno we-ransomware. AbaHackers basebenzisa izikripthi ezenziwe ngokuzenzekelayo ukuphula i-intanethi kumzamo wokuukuxhaphaza ubunzima kwisofthiwe.
Ngezantsi ezinye zeengcebiso ezilungiselelwe ngu-Igor Gamanenko, i Semalt Umphathi Wempumelelo yoMthengi, ukukhusela wena kunye newebhusayithi yakho.
Umlawuli wewebhusayithi kufuneka alumkele ulwazi oluboniswe kuweimiyalezo yesiphoso. Mane unikeze iimpazamo ezilinganiselwe kubasebenzisi bakho, ukuqinisekisa ukuba abanikanga idatha eyimfihlo kwiinkonzo zakho ezifanaiiphasiwedi okanye iifayile ze-API.
Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa iiphasiwedi eziyinkimbinkimbi ukufikelela kumaseva wakho okanyekwicandelo lomlawuli webhsayithi. Abasebenzisi kufuneka bakhuthazwe ukuba basebenzise iiphasiwedi ezinamandla ukukhusela iakhawunti zabo. Udibaniso lwamanzi,i-lowercase, amanani kunye nabalinganiswa abakhethileyo bakha iphasiwedi ephephile. Amaphasiwedi kufuneka agcinwe esebenzisa i-algorithm ye-hashing. Iwebhusayithiukhuseleko lunokuphuculwa ngokusebenzisa ityuwa entsha kunye neyodwa kwiphasiwedi.
Ukukhusela umzamo wokuqhawula, kucetyiswa ukuba ugweme ukufikelela ngokuthe ngqo ukulayishwaiifayile. Naliphi na ifayile elayishwe kwiwebhusayithi yakho kufuneka igcinwe kwifolda eyahlukileyo ngaphandle kweWebroot. Iskripthi esahlukileyo kufuneka sibeidalwe ukulandelela iifayile ezivela kwifolda yangasese kwaye zibanceda kwi-browser.
Yimigaqo-nkqubo, enika ukhuseleko kwiwebhu. Iqinisekisa abasebenzisi ukubabafikelela kumncedisi abakulindeleyo nokuba akukho nkunkuma inokuyithintela umxholo abahamba ngawo. Iwebhusayithi exhasa inkxasoamakhadi okanye ezinye iifom zentlawulo kufuneka zisebenzise i-cookie yangempela ithunyelwe naliphi na isicelo somsebenzisi. Oku kunceda ukuqinisekisile izicelo ngoko ukuvalaukuhlaselwa.
Sebenzisa izixhobo zokukhusela iwebhusayithi
Emva kokuba uyenzile yonke imilinganiselo engentla, ukuvavanya ukhuseleko lakho kwiwebhusayithiluleke kakhulu. Kuyenziwa ngokusetyenziswa kwezixhobo zokuvavanya ukungena, ezibandakanya i-Netsparker, i-OpenVAS, i-Headers Head.io ne-Xenotix XSSIsiCwangciso soPhulo. Iziphumo zokusebenzisa izixhobo zibonisa uluhlu olubanzi lwezinto ezinokuxhalabisa kunye nezisombululo eziphambili.